Manchester United Oo Guul Raaxo Ah Ka Gaartay Kooxda Sheffield United
HomeHoryaalka IngiriiskaManchester United oo guul raaxo ah ka gaartay kooxda Sheffield United
December 18, 2020 Horyaalka Ingiriiska, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Kooxda Man United ayaa guul soo laabasho leh ka gaadhay kooxda dhibaatoonaysa ee wali bilaa guusha ah ee Sheffield United Kulan ka tirsanaa horyaalka premier League.
Kooxda Man United ayaa si xun ku bilaabatay ciyaarta iyaga oo khaladaad ku bilowday daqiiqadihii ugu horeeyay ee ciyaarta.
Kabtanka Man United ee Harry Maguire ayaa khalad galay bilowgii ciyaarta isaga oo kubad u dhiibay goolhaye Dean Henderson kaas oo isna sii khaldmay sabab-na u noqday in ay Sheffield United Dhaliso gool deg-deg ah daqiiqadii 5-aad kaas oo uu u dhaliyay xiddiga David McGoldrick.
Wixii intaas ka dambeeyay Man United ayaa la wareegtay maamulista ciyaarta iyaga oo sameeyay fursado cajiib ah oo ay goolal ku dhalin kareen.
Daqiiqadii 26-aad ayay Man United dhalisay goolka bar-baraha iyaga oo uu u dhaliya Xiddiga Marcus Rashford kaas oo ciyaarta ka dhigay 1/1 bar-baro lagu noqday.
Man United ayaan halkaas ku joogsan waxana ay sii wadeen raadinta goolasha iyaga oo Sheffield United ku hayay weerar cir iyo dhul ah oo aan loo kala hadhin.
Daqiiqadii 33-aad ayay Man United hogaanka u qabatay ciyaarta iyaga oo uu goolka u dhaliyay xiddiga Anthony Martial kaas oo ciyaarta ka dhigay 2/1 ay United ku hogaaminayso.
Waxa sidaas ku dhamaatay qaybta hore ee ciyaarta oo Man United ciyaarta hogaaminayso waliba ka soo kabsatay goolkii looga hor maray.
Man United ayaa sii waday dadaalka ay ku doonayso in ay ciyaarta ku disho iyaga oo doonayay in ay Sheffield United ka hor istaagaan fursado ay ugu soo laaban karto.
Daqiiqadii 51-aad ayay Man United dhalisay goolka 3-aad ee ciyaarta iyaga oo uu mar kale u dhaliyay xiddiga Marcus Rashford kaas oo ciyaarta ka dhigay 3/1.
Xilli ay United u muuqatay mid ciyaarta ayay Sheffield United Soo laabasho lama filaan ah samaysay kadib markii ay daqiqad 87-aad dhaliyeen goolka 2-aad iyaga oo uu u dhaliyay xiddiga David McGoldrick kaas oo ciyaarta ka dhiga 3/2.
Koxxda Man United ayaa difaacatay goolkii ay ku hogaaminaysay ciyaarta iyaga oo gaadhay guul 3/2 ah oo ay Red Devils ku gaadhay guul muhiim ah